Ireo mpamatsy vola antsika - Manisa ny fanjakana
Tsidiho ny tranokalan'i Christine
Christine Watkins, MTS, LCSW, dia mpiteny sy mpanoratra katolika malaza, mipetraka any Kalifornia miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany telo. Mpanompo tsy mino an'Andriamanitra taloha, dia nanolotra fiainana fanompoana ho an'ny fiangonana katolika taorian'ny nanasitranana an'i Jesosy tamin'ny alàlan'i Maria, izay namonjy azy tamin'ny fahafatesana. Talohan'ny niovany fiovam-pony, dia nandihy niaraka tamin'ny orinasa San Francisco Ballet izy. Ankehitriny, manana traikefa roapolo taona izy amin'ny maha-mpitondra tenin'ny katolika azy, mpitarika ny iraka fisintahana ary mpitarika ny fiangonana, mpitantana ara-panahy ary mpanolotsaina, ary folo taona amin'ny maha mpanolotsaina alahelo azy ary folo amin'ny maha-talen'ny fanasitranana aorian'izay. Nahazo ny mari-pahaizana Masters tao amin'ny Welfare sociale avy ao amin'ny University of California tao Berkeley i Watkins, ary ny Masters azy momba ny Teolojia momba ny Teolojia ao amin'ny Jesuit School of Theology ao Berkeley. Miara-miasa amin'ny fampisehoana i Watkins miaraka amin'ny fampisehoana "Mitadiava zavatra bebe kokoa, tadiavo ny làlanao", ao amin'ny Radio Maria, ary namorona sy nampiseho ny fampisehoana manokana izy tamin'ny fahitalavitra Shalom. Izy no CEO sy mpanorina www.QueenofPeaceMedia.com ary ny mpanoratra ny Amazon # 1 mpivarotra lafo indrindra: IREO LALANA SY MARY; Ny fomba ahazoan'ny lehilahy enina ny ady lehibe indrindra amin'ny fiainan'izy ireo, TRANSFIGURED: Ny fandosiran'i Patricia Sandoval amin'ny zava-mahadomelina, ny tsy fananana trano ary ny varavarana any aoriana any amin'ny fikambanan'ny ray aman-dreny nokasaina., amin'ny teny espaniola ihany koa amin'ny lohateny, TRANSFIGURADA, FARANY amin'ny tantaram-panahy: Tantara mahagaga momba ny fanasitranana sy fiovam-po amin'ny alalàn'i Maria, FIVORIARANA MIVAVAHAN'I MARY: fialana ara-panahy ho an'ny fanampian'ny lanitra miaraka amin'ilay NY VAVOLOMBELON’I MARIANA Vavaka fanontam-bavaka, ary NY FAHAGAGANA: Ny fijoroana ho vavolombelona sy faminaniana momba ny fanoratana ny fahazotoana. jereo www.nitehawk.com, ary raha mila fanazavana fanampiny momba ny bokin'i Christine etsy ambany, kitiho eto.
Tsidiho ny tranokalan'i Mark
Mark Mallett dia mpanao katolika cradle-katolika ary mpanao gazety tamin'ny fahitalavitra taloha. Tamin'ny 1993, dia nasaina hanao fanompoana ho an'ny Batista iray ny namany akaiky izy, dia ny Katolika latsaka. Rehefa tonga i Mark sy ny vadiny Lea, dia voadaroka avy hatrany ry zareo tanora mpivady ary ny hatsaram-panahiny. Ao amin'ny serivisy, tsara tarehy sy voarangotra ny mozika; ny toriteny, voahosotra, ilaina ary miorim-paka ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Taorian ny fotoam-panompoana dia notarihin'ny mpivady maromaro indray izy ireo. “Te hanasa anao amin'ny fianaranao Baiboly izahay rahampitso… amin'ny talata, manambady alina izahay… ny alarobia izao, manao lalao basikety fianakaviana izahay eny amin'ny gym… Ny alakamisy dia fiderana sy fiankohofantsika hariva… ny zoma izao no… . " Rehefa nihaino izy dia takatr'i Mark fa tena nisy izany dia vondron'olona kristiana, fa tsy amin'ny anarany fotsiny - tsy mandritra ny adiny iray amin'ny alahady ihany.
Rehefa niverina tany amin'ny fiarany i Mark dia nipetraka teo tao anatin'ny fahanginana. "Mila izany izahay," hoy izy tamin'ny vadiny. "Ny zavatra voalohany nataon'ny Fiangonana voalohany dia ny vondron'olona ifotony saingy ny paroasintsika dia tsy inona ary. Ary eny, manana ny Eokaristia isika ... fa tsy ara-panahy ihany fa koa ara-tsosialy olombelona. Mila ny Vatan'i Kristy ao amin'ny vondrom-piarahamonina koa isika! Tsy nilaza ve i Jesosy hoe: 'Aiza ny roa na telo no miangona amin'ny anarako, eo afovoany ve aho? ' Ary 'Izany no hahafantaran'ny rehetra fa mpianatro ianareo, raha mifankatia? '" Fatratra ny fanaintainana sy fisavoritahana lalina, nanampy i Mark hoe: "Angamba tokony manomboka tonga eto isika ... ary handeha any Mass amin'ny andro iray hafa."
Tamin'io alina io, rehefa nifototra ny nifiny izy, nihetsika tao an-tsainy ny zava-niseho tamin'ny andro voalohany, dia nandre feo miavaka tao am-pony i Mark:
Mijanòna, ary manaova hazavana ho an'ny rahalahinao ...
Nijanona, nijerijery ary nihaino. Niverina ilay feo:
Roa herinandro taty aoriana, nipetraka teo amin'ny seza nijery i Mark Rome Sweet Home -Ny fijoroana ho vavolombelona nataon’ny Dr. Scott Hahn ny fomba nanombohany handrava ny fampianarana katolika ... nefa nifarana tamin’ny naha-Katolika azy. Rehefa nifarana ny horonantsary dia nirotsaka ny ranomasony nitsoaka ny tarehin'i Mark ary fantany fa izy ihany koa no tao an-trano. Nandritra ny taona maro ho avy, dia nandatsaka fialan-tsiny tamin'ny Katolika i Mark, ary nody indray tamin'ny Fampakaram-badin'i Kristy, ary nankatò ny teny hafa tonga herintaona taty aoriana: "Ny mozika dia varavarana hitoriana ny filazantsara." Tamin'izay no nanomboka ny ministeran'ny mozika Mark.
Nandritra ny Andro Tanora Eran-tany tany Toronto, Kanada tamin'ny 2002, izay nihira i Mark dia niantso ny Papa Masindahy John Paul II tamin'ny asa ara-paminaniana ny tanora:
Ry tanora malala, anjaranao io ho ilay mpiambina amin'ny maraina izay manambara ny ho avy ny masoandro izay ilay Kristy nitsangana! — PAPA JOHN PAUL II, Hafatry ny Ray Masina ho an'ny Tanora amin'izao tontolo izao, XVII Tanora Tanora Eran-tany, n. 3; (jer. Is 21: 11-12)
Nanodidina ny efa-taona taty aoriana, dia naniry mafy hivavaka i Mark talohan'ny sakramenta voatahy. Teo dia nanana traikefa lalina izy izay nanasan'ny Tompo azy manokana handray ity antso ity ho "mpitazana" (jereo Nantsoina tamin'ny rindrina). Teo ambany fiahian'ny talenta ara-panahy dia nanoratra i Mark NY FIVORIANA TRANO ary nandefa ny bilaoginy, Ilay Teny Ankehitriny, izay mitohy mandrak'androany ho "fahazavana" ho an'ireo firenena amin'izao vanim-potoana mainty izao. Marika koa i Mark mpamoron-kira amin'ny album fito amin'ny anarany, ary koa ny fanomezana an'i St. John Paul II, "Hira ho an'i Karol. " Manan-janaka valo i Mark sy ny vadiny ary mipetraka any Canada. jereo manonymo.com.
Ireo tanora dia naneho ny tenany ho an'i Roma sy ho an'ny Fiangonana ho fanomezana manokana ny Fanahin'Andriamanitra ... tsy nisalasala aho nangataka azy ireo hanao safidy tsara sy finoana ary hanolotra azy ireo amin'ny asa manaitra: ho tonga “maraina mpiambina ”tamin'ny fiposahan'ny taona arivo vaovao. —POPE ST JAONA PAUL II, Novo Millennio Inuente,n.9
(miaraka amin'ny Nihil Obstat)
Teraka tany Londres fa monina any Frantsa hatramin'ny 1994, Peter Bannister dia mpikaroka amin'ny sehatry ny siansa sy ny fivavahana, mpitendry zavamaneno matihanina, izay ahitana ny toerany ho organista ho an'i Taizé, ary mpivady sy raim-pianakaviana. Manana mari-pahaizana maîtrise avy amin'ny University of Cambridge (musicology) sy University of Wales (Theological Systematic and Philosophical Theology) izy ary nahazo loka nasionaly sy iraisam-pirenena maro ho an'ny fampisehoana mozika sy ny famoronana. Nandritra ny taona maro dia mpikambana tao amin'ny ekipa mpikaroka ao amin'ny Departemantan'ny siansa sy fivavahana ao amin'ny Oniversite katolika Lyon izy ary tonian-dahatsoratry ny tranokala fampianarana frantsay, www.sciencesetreligions.com, novatsian'ny Templeton World Charity Foundation. Ny sangan'asany momba ny teolojia, ny filozofia ary ny mozika dia navoakan'ny Cambridge University Press, Ashgate ary RoutXNUMX; izy no mpanoratra an'i TSY MISY INDRINDRA: Papa Francis sy ireo mpanam-boninahitra tsy mitovy aminy.
Tsidiho ny tranokalan'i Daniel
I Daniel O'Connor dia mpampianatra ny filozofia sy foto-pinoana ho an'ny oniversite an'ny oniversite any New York (SUNY). Injeniera iray tany am-boalohany, nanova ny fikarakarana karatra i Daniel ary nahazo ny mari-pahaizana Master amin'ny Theology avy ao amin'ny Holy Apost College sy Seminary any Cromwell, CT, ary mpianatra dokotera amin'izao fotoana izao, miasa ao amin'ny PhD ao amin'ny filozofia. Raha ny Katolika no voalohany sady lehibe indrindra, dia tsapany fa ny iraka manokana amin'ny fiainany dia ny fampiroboroboana fanambarana manokana manokana: indrindra ny Famindrampon'andriamanitra izay nasehon'i Jesosy tao amin'ny St. Luisa Piccarreta. Mipetraka any New York i Daniel miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany efatra. Hita ao amin'ny tranokalan'izy ireo manokana www.DSDOConnor.com. Izy no mpanoratra NY FIVORIAN-DAHATSORAN-TRANO: Ao amin'ny fanambarana an'i Jesosy mankany Luisa Piccarreta ary NY TENAN'ANDRIAMANITRA: Ny vanim-potoana mahafinaritra amin'ny fiadanam-pirenena.